क्रिश्चियन धर्म प्रचारक अाइएनजिअाेले कसरी किन्न सक्छ सरकार र नेताहरुलार्इ...... - Kendra Khabar
क्रिश्चियन धर्म प्रचारक अाइएनजिअाेले कसरी किन्न सक्छ सरकार र नेताहरुलार्इ……
२०७५, १४ मंसिर शुक्रबार ०४:२७
एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाले कसरी कुनै मुलुकका सरकार र नेताहरुलार्इ किन्न सक्छ भन्ने एउटा गतिलाे उदाहरण बनेकाे छ- एसिया प्यासिफिक सम्मिट २०१८ ।
क्रिश्चियन धर्मलार्इ नयाँ अावरणमा ‘गुलियाे’ बनाएर बेच्न खप्पिस दक्षिण काेरियाली नेता सन म्याे‌ङ्ग मुन (जसकाे सन् २०१२ मा निधन भइसकेकाे छ) ले एउटा स‌ंस्था खडा गरे । नाम दिए- युनिभर्सल पिस फेडेरेशन ! झट्ट हेर्दा याे कुनै विश्व शान्तिका लागि स्थापित ठुलै स‌ंस्था हाे, लाग्न सक्छ । मानाैँ कि अर्काे राष्ट्रस‌ंघ । हुन पनि यसका शाखा सञ्जाल नपुगेकाे कुनै महाद्वीप र द्वीप बाँकी छैन हाेला । तर भ्रममा नपर्नुहाेस्, याे कुनै अर्काे राष्ट्र संघ हाेइन । शान्ति तथा मेलमिलापमा नाममा तीव्र सांस्कृतिक विखण्डीकरण गर्ने एक गैरसरकारी संस्था हाे ।
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपीएफ) की अर्की संस्थापक हुन्- हाज जा हान । जाे डा‍‌ सन म्याेङ्ग मुनकी पत्नी हुन्, जसले ‘युनिफिकेशन चर्च’काे नेतृत्व गर्दै अाएकी छिन् । उनी यस सम्मेलनकी सबैभन्दा महान् माताकाे रुपमा नेपाल अाएकी छिन् । उनै चर्चकी ‘मदर’बाट नेपालका प्रधानमन्त्री केपी अाेली दम्पत्ति र विभिन्न टापु राष्ट्रबाट अाएका सरकार/राष्ट्रप्रमुख लगायत ४ हजार जाेडीहरुले ‘अाशीर्वाद’ थाप्दै छन् । जसमा नेपालका मात्रै १५ सय ‘विशिष्ट’हरुकाे जोडी हुने सम्मेलनकै प्रेस संयाेजकले जानकारी दिएका छन् । धार्मिक ‘रीत’ले पुर्याएर आशीर्वाद दिनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चर्चकी ती गुरुआमाले ‘नेतृत्व तथा सुशासन पुरस्कार’ प्रदान गर्ने जनाइएकाे छ । अाशीर्वाद ग्रहण गरेपछि उनीहरु सबैलार्इ युपीएफले मुन परिवार अर्थात् अाफ्नै संस्थाका सदस्यका रुपमा मान्यता दिनेछ । वर्षमा यस्ता अाशीर्वाद दिने सानाठूला सयाैँ कार्यक्रमहरु यपीएफले गर्दै अाएकाे छ ।
संसारमा सबैभन्दा तीव्र रुपले सांस्कृतिक विचलन भाेग्दै इसाइकरण भएकाे राष्टकाे रुपमा दक्षिण काेरियाकाे नाम लिने गरिन्छ । तपार्इ हाम्रै दैलाेमा इसाइ धर्मका व्याख्यान लाउँदै एकाबिहानै तिनै काेरियाली नागरिक सहितका व्यक्ति छ्यापछ्याप्ती अाउने गरेकाे देख्नुभएकै हाेला । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि अन्य वरिष्ठ नेताहरुसम्मलार्इ युपीएफले निकैपटक काेरिया लगायतका देशमा घुमाएर ‘गुन’ लाइसकेकाे छ । यसकाे जस पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाललार्इ जान्छ । जाे परिवार दल नामक राजनीति पार्टी खाेलेर पहिलाे सं‍विधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद भएपछि बढी चर्चामा अाउन थालेका हुन् । जसले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, डा बाबुराम भट्टरार्इदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीसम्मलार्इ प्रभावित पारेर अाफ्नाे ‘स्वार्थ’ पूरा गर्न निरन्तर सफल हुँदै अाएका छन् । पछिल्लाे उनी युपीएफकै नेपाल च्याप्टरका प्रमुख रहिअाएका छन् ।
जब स‌ंविधानसभाकाे मुद्दाले सार्थकता पाउँदै अायाे त्यति नै बेलादेखि विभिन्न एनजिअाे, अाइएनजिअाेका नाममा इसाइ धर्मकाे व्यापार फस्टायाे । हेक्का राख्नै पर्ने कुरा- समाज सेवाकाे नाममा छिरेर तिनीहरुले समाजमा सांस्कृतिक विचलन र धर्मान्तरणकाे धन्दा चलाउँदै अाए ।
कार्यक्रमको एक सय एक सदस्यीय आमन्त्रण समितिका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रहेका छन् । नेकपाका नेता समेत रहेका नेपाल अाफैमा विवादास्पद व्यक्ति हुन् । स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तम्सिने नेता नेपाल युपीएफ अन्तरगतकै सानाठूला कार्यक्रममा विगतदेखि नै देखिँदै अाएका छन् । सबैभन्दा बढी विदेश गइरहने नेताकाे छवि बनाएका नेपाललार्इ युपीएफले नै कैयाैँपटक काेरिया र अन्य देशकाे भ्रमण मिलाइदिएकाे छ ।
भन्नलार्इ कम्युनिष्ट भनिए पनि वर्तमान सत्ताधारी नेकपाका नेताहरुमा तीव्र विराेधाभासी चरित्र देखिइरहेका छन् । विशुद्ध धर्म प्रचारकाे उद्देश्यले अायाेजित सम्मेलनमा सरकार नै सह-अायाेजक हुनु (अालाेचनापछि सपाेर्टर मात्र भनिएकाे छ) । याे सम्मेलन सरकार स्वय‌ंले अायाेजना गरेका यसअघिका बिमस्टेक र सार्क शिखर सम्मेलनभन्दा ठूलाे देखिएकाे छ । जहाँ करिब ४५ देशका सरकारी प्रतिनिधि तथा धार्मिक अगुवासहितका व्यक्ति अाएका छन् ।
युपीएफ अाफैमा विवादित संस्था पनि हाे । यति विवादित सम्मेलन अन्त नभर्इ नेपालमै हुनु र यहाँ सरकारले नै ठूलाे महत्व दिएर उल्टै बजेट छुट्याउनु सरकारकाे लाचारीपना हाे या दबाव ? कतै याे हाे सत्तासीन व्यक्तिहरुकाे व्यक्तिगत लाभका उद्देश्यले प्रेरित त छैन ? सर्वत्र अाश‌ंका, चासाे र बहसकाे विषय बनेकाे छ याे ।
सम्मेलनमा हाक जा हानलार्इ ‘जेससकी एक मात्र सच्चा छाेरी’ घाेषणा गर्न लागिएकाे बताइएकाे छ, जुन कार्यक्रम यसअघि फिजीमा पनि गर्न लागिएकाेमा त्यहाँकाे सरकारले अनुमति नदिएपछि नेपालमा टार्गेट बनाएकाे बताइन्छ । पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्यको भनाइमा विवादित सम्मेलन नेपालमै आयोजना हुनुमा यहाँकाे ‘सजिलोपन’ नै मुख्य कारण हाे किनभने हाम्राे राज्यशक्तिमा भएकाहरूलाई ‘रिझाउन’ धेरै कसरत गर्नुपर्दैन । हुन पनि कुनै सानाेतिनाे लाभका अवसरमा समेत बिक्न सक्ने नेताहरूले देश चलाइरहेका छन् । यसकाे उदाहरणका रुपमा यही यपीएफ स‌ंस्थाकाे पहलमा विभिन्न नेताहरु बेलाबेला कोरियालगायत विदेश गइरहनु हाे ।
बिम्स्टेक र सार्क शिखर सम्मेलनपश्चात ४ दिनसम्म सडक यात्रुलार्इ सास्ती हुनेगरी सवारी अावागमनमा जाेर-विजाेर प्रणाली लागू गरेकाे याे पहिलाे अनाैठाे घटना हाे, जसमा अाम सर्वसाधारण नै जानकार छैनन् कि कुन विशिष्ठ महत्वकाे सम्मेलन नेपालमा भइरहेकाे छ ? विशिष्ट पाहुनाका लागि भनेर बेलाबेला हवार्इ अावागमन समेत प्रभावित भइरहेकाे छ । जानकाहरुले भने सरकारकाे याे लाचारीपनाकाे चर्काे विराेध र अालाेचना गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालभरि याे सम्मेलनकाे उपादेयता खाेज्दै सरकार, त्यसमा संलग्न नेताहरु र स्वय‌ं अायाेजक संस्थाकै समेत तीव्र अालाेचना गरिरहेका छन् । सम्मेलनकै लागि ३१ कराेड बजेट नेपाल सरकारसँग माग भएकाे कुरा बाहिर अाएकाे छ जसमध्ये २ कराेड विनियाेजन नै भइसकेकाे बताइन्छ । यद्यपि सम्मेलनमा २० कराेड खर्च हुने र साे सबै खर्च युपीएफकाे अमेरिकास्थित सचिवालयले बेहाेर्ने त्यसका नेपाल प्रमुख एकनाथले बताएका छन् ।
काे हुन् मुन दम्पत्ति, के हाे युफीएफ ?
अाफूलार्इ क्राइस्टपछिका परमेश्वरका अवतारकाे रुपमा दाबी गर्दै अाएका डा सन म्याेङ्ग मुन र उनकी पत्नी हाक जा हान काेरियन नागरिक हुन् । जिसस क्राइष्टले पूरा गर्न नसकेको दायित्व पृथ्वीमा पूरा गर्नकै लागि अाफूलार्इ खटाएकाे दाबी उनीहरुले गर्छन् । युपीएफका भक्तहरुले डा मुनलार्इ ‘फादर मुन’ भन्छन् भने युनिफिकेशन चर्चकी प्रमुख हाक जा हानलार्इ ‘सबैकी अामा’ वा ‘जिसस (गड) की एक मात्र जीवित सच्चा छाेरी’ जस्ता विशेषण भिराइदिएका छन् ।
मुनले आफूलाई ‘मसिहा’ घोषणा गर्दै सन् २००५ मा उनले युपीफकाे स्थापना गरेका थिए । सन् २०१२ मा मुनको निधनपछि उनकी पत्नी हानले यूपीएफको नेतृत्व गर्दै अाएकी छिन् । उनी साे संस्थाकी धर्मगुरु हुन्, जसले आफूलाई ईश्वरकै अवतारका रुपमा दाबी गर्दै अाएकी छन् ।
४० वर्षका मुनले सन् १९६३ मा अाफूभन्दा २३ वर्ष कान्छी हानसँग विवाह गरेका थिए । यी दम्पती र उनका एजेन्टहरुले सामूहिक रूपमा विश्वभरका दम्पतीहरूलाई वैवाहिक प्रतिबद्धताका नाममा अाफ्नाे धार्मिक रीति र मन्त्रअनुसार ‘आशीर्वाद’ दिँदै आएकाे पाइन्छ । यस प्रकारका कार्यक्रम नेपालका स्थानीय तहहरुसम्मै विस्तार गरेर वर्षैपिच्छे अायाेजना हुने गरेका छन् । यसप्रकार ‘पवित्र’ जल छर्केर आशीर्वाद लिएपछि दम्पतीबीचकाे सम्बन्ध अटुट बन्ने र सबै ‘पाप’बाट मुक्त भइने विश्वास दिलाउने गरिएकाे छ । यसरी अाशीर्वाद लिएर पापमुक्त भएका जोडीबाट जन्मिने सन्तान पृथ्वीमा ‘शान्तिदूत’ हुने अास्वासन दिइन्छ । बेलाबेला भइरहने यस्ता कार्यक्रमहरुपिच्छे समाजका केही युवा र पेशाकर्मीलार्इ समेत बाेलाएर ‘शान्तिदूत’काे सम्मान र प्रमाण दिने र पछि देश-विदेशका सम्मेलनहरुमा लैजाने गरिन्छ । जसबाट यस संस्थाकाे सञ्जाल व्यापक रुपमा नजानिँदाे ढंगले फैलँदै र बलियाे हुँदै गएकाे देखिन्छ ।